တွေ့ ကြုံ ခံစားမှူတွေကို ဖွင့်ထွက်တဲ့ ဒီနေရာ
သူ ပိုပြီး ရနေတယ်
ဘာရယ်လို့မဟုတ်ပါဘူး။ ဗီယက်နမ်က ပြန်ရောက်ရောက်ခြင်း ခံစားရတာကို ကဗျာအဖြစ် ပြောင်းကြည့်တာပါ။ ဗီယက်နမ် ဆိုပေမယ့် မြို့ ပေါ် မဟုတ်ပါဘူး၊ ဟိုချီမင်းကနေ တော်တော်ဝေးတဲ့ နယ်မြို့ လေးပါ။ အလုပ်ကိစကြောင့်ပါ။
Posted by ရွက်လွင့်ခြင်း at 2/24/2010 12 comments:
အွန်လိုင်းပေါ် မရောက်တာ အတော်ကြာပြီး ညီအကို မောင်နှမတွေနဲ့မဆုံဖြစ်တာ အတော်ကို ကြာသွားတယ်။ ကျွန်တော် ဘလော့ဂ်ရဲ့ လတ်တလော အခြေအနေမှာ ရေးထားတဲ့အတိုင်း အမေရောက်လာတဲ့ အတွက် အလုပ်လည်း နဲနရှုပ်ပြီး ဘလောဂ့်ပေါ်မရောက်ဖြစ်တာပါ။ အားတဲ့အချိန်လေး မောင်နှမတွေရဲ့ ဘလောဂ့်တွေတော့ ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကွန်မန့် တော့ မရေးဖြစ်ခဲ့ဘူး။
ဘယ်လောက်ထိ အလုပ်က ရှုပ်လည်းဆို ခွင့်ကလည်း ဘယ်လိုမှ ယူလို့ မရ(နှစ်ကလည်း ကုန်ကာနီးပြီဆိုတော့း))။ အမေရဲ့ စင်္ကာပူ မာလ်တီပယ် ဗီဇာကလည်း အချိန်မှီ စလုံးကို ပြန်ဝင်လို့ ရအောင် မလေးရှား ကေအယ်လ် နဲ့စလုံးကို စုန်ဆန်ချည် ပြေးလိုက်ရတာ ဖက်ဖက်ကို မောသွားပါလေရော။
အမေက လာကတည်းက မလေးဗီဇာလည်း ယူလာတော့ ဗီဇာမကုန်ခင် မလေးကို ဝင်ဖို့အရင်လုပ်ရတယ်။ ဒါနဲ့ ပဲ မလေးမှာရှိတဲ့ အမျိုးတွေနဲ့လှမ်းချိတ်၊ ပြီးတော့ Golden Mile က ဘတ်စ်နဲ့စနေနေ့အမေ့ကို လိုက်ပို့ နောက်တစ်ရက် တနင်္ဂနွေကျ စလုံးကို တစ်ယောက်တည်း ပြန်လာရတယ်။ ဒါတောင် ဟိုကလူတွေက ဆွဲထားလို့မနည်းတောင်းပန်ရတာ။
အသွားတုန်းကလည်း Golden Mile က ထွက်တဲ့ ဘတ်စ်တွေက Tuas ဖက်က ထွက်တော့ စလုံးဘက်က လဝက က ပြဿနာ မရှိပေမယ့် မလေးဘက်လည်းရောက်ရော ကျွန်တော့်ရဲ့ ပတ်စပို့စာအုပ်က မတ်လမှာ ကုန်မှာဆိုတော့ မလေး သကောင့်သား လဝက က ရစ်ချင်နေတယ်။ ကံကောင်းတာက သူတို့ ရဲ့ Officer မလေး အဘွားကြီးက ရတယ်ဆိုပြီး လွှတ်လိုက်လို့ ။ ဒါတောင် ပညာက ပြလိုက်သေးတယ်။ အမေနဲ့ကျွန်တော် အတူတူ ဝင်တာကို အမေ့ကို ရက်သုံးဆယ် ပေးပြီး ကျွန်တော့်ကြတော့ တစ်ပတ်ပဲ ပေးလိုက်တယ်။
နောက်တစ်ပတ်ကြတော့ ကျွန်တော် စဉ်းစားပြီး Tuas ဘက်က ထပ်ဝင်ရင် ဒီကောင် ရစ်ဦးမှာပဲဆိုပြီး Woodland ဘက်က ဝင်မယ်ဆိုပြီး ဆုးံဖြတ်လိုက်တယ်။ ဒါနဲ့ Kranji MRT ကနေ 107 ဘတ်စ်ကားစီးပြီး ဂျိုဟိုးဖက်ကို ကူးတာ Larkin ကားဂိတ်ထိကို ရောက်ရော။ ဒီတစ်ခေါက် မလေး လဝက ကတော့ ဘာမှကို မမေးတော့တာ။ နောက်တော့ Larkin ကားဂိတ်ကနေ ကေအယ်လ်ထိ ဘတ်စ်ကားစီးပြီးတော့ သွားတာပေါ့။ ကုန်ကျစရိတ်က အများကြီးကို သက်သာတယ်။
ကေအယ်လ် ဝင်ဝင်ချင်း စိတ်ညစ်စရာတစ်ခု ကြုံရသေးတယ်။ ဘာလည်းဆိုတော့ Traffic Jam။ ဘယ်လောက်ထိဆိုးလည်းဆိုရင် ကေအယ်လ် တိုးဂိတ်ကို ကားဖြတ်တော့ နေ့ လည် နှစ်နာရီခွဲ သာသာပဲ ရှိဦးမယ်။ စပြီး ကားပိတ်မိနေတာ။ တရွေ့ ရွေ နဲ့သွားလိုက်တာ နောက်ဆုံး ကားဂိတ် Pudu Rarya ကို ညနေလေးနာရီမှ ရောက်ပါတော့တယ်။ ဒီကြားထဲ ကားပေါ်မှာ ဆီးသွားချင်တာ တစ်ပိုင်းကို သေရော။ ကားရပ်ရပ်ချင်း ပထမဦးဆုံး အိမ်သာကို ပြေးရပါရော၊ မလေးငွေ ပြားနှစ်ဆယ်ထည့်ရတဲ့ လမ်းဘေးက အိမ်သာလေး။ မဆိုးပါဘူး သပ်သပ်ရပ်ရပ် သန့် သန့် ရှင်းရှင်းနဲ့အစဉ်ပြေပါတယ်။
နောက်မှ အမေတည်းနေတဲ့ ပူချွှန်းအရပ်ကို သွားရတယ်။ ဒီလိုနဲ့တစ်ညအိပ်ပြီး နောက်တစ်နေ့့မနက် ကေအယ်လ်ရဲ့ ပြယုဂ်ဖြစ်တဲ့ KLCC tower ကို သွားလည်ဖြစ်တယ်။ ဓါတ်ပုံတွေ ဘာတွေရိုက်ပြီး မြို့ လည်က SOGO ကုန်တိုက်ကို ဝင်လည်ဖြစ်တယ်။ ထမင်းစားချိန်ရောက်တော့ အဲဒီ SOGO ရဲ့ ခြောက်ထပ်မှာရှိတဲ့ မြန်မာထမင်းဆိုင် Paradise Palace မှာ နေ့ လည်စာ စားခဲ့ရတယ်။ အစားအသောက် တော်တော်လေးကို တန်တယ်။ ငါးယောက်စားတာ အအေးပါ အပါအဝင် မလေးပိုက်ဆံ ၁၂၆ ရင်းဂစ်ပဲ ကျတယ်။
စားပြီးတာနဲ့ကားဂိတ်သွား စလုံးပြန်မယ့် ကားလက်မှတ်ဖြတ်ပြီး နေ့ လည်နှစ်နာရီလောက်မှာ ကေအယ်လ်ကို နှုတ်ဆက်ပြီး စလုံးကို ပြန်လာတော့တယ်။ ညနေ ခုနှစ်နာရီလောက်မှာ စလုံးမြေကို ပြန်နင်းလိုက်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း တော်တော်လေးကို ပင်ပန်းသွားပြီး အနားယူလိုက်တာ အခုမှပဲ ပိုစ့်ပြန်တင်နိုင်တော့တယ်။
လာရောက်လည်ပတ်တဲ့ မောင်နှစ်မများအားလုံး ဧည့်ဝတ်မကျေခဲ့တာရှိရင် ခွင့်လွှတ်ပါလို့တောင်းပန်လျှက်............။
Posted by ရွက်လွင့်ခြင်း at 11/07/2009 16 comments:
A for All of Blogger
ညီမငယ် ဝိုင်း တဂ်ထားတာပါ၊ အတော်တောင် ကြာသွားတယ်။ မနည်း အချိန်လုပြီး တင်လိုက်ထာပါ ညီမရေ
1. What is your name : Andrew
3. A boy's Name : Aerosmith
4. A girl's Name : Angle
5. An occupation : Actor :)
6. A color : Azure (like as sky-blue)
7. Something you'll wear : Addidas
8. A food : Avocado
9. Something found in the bathroom : Air pump
11. A reason for being late : Always traffic jam
12. Something you'd shout : Ayah;;;;;;;
13. A movie title : Away we go
14. Something you drink : Alcohol (Chivas)
17. A street name : Ah Hood Rd (Toa Payoh Buddisht Temple)
19. The title ofasong : Anywhere for you (Back Street Boys)
20. A verb : Act
ဘလောဂါ မောင်နှမအားလုံး ပျော်ရွှင်ကြပါစေ။ ။
Posted by ရွက်လွင့်ခြင်း at 10/21/2009 15 comments:
ဘလော့ လာဖတ်သူ အားလုံးလည်း မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်လိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော်လည်း အိမ်ပြောင်းနေရလို့အွန်လိုင်းပေါ် မရောက်တာ အတော်ကို ကြာသွားတာ၊ အိမ်ပြောင်းရတာလည်း နောက်တစ်ပတ်ဆို မာတာမိခင် မွေးမေမေ စလုံးကို အလည်လာမယ်လို့ပြောထားတယ်။ အခုနေတဲ့ အိမ်က ယောင်္ကျားလေးတွေချည်းပဲဆိုတော့ အမေလည်း မလွတ်လပ် သူတို့ လည်း မလွတ်လပ် ဒါကြောင့် သူငယ်ချင်း မိသားစုအိမ်ကို ရွေ့ လိုက်ရတယ်။
အိမ်ရွေ့ ရတဲ့ ဒုက္ခကလည်း တော်တော်မသေးဘူး၊ အိမ်ပြောင်းဘူးရင် သိမှာပါ။ တစ်ပတ်လောက် အထိုင်မကြနိုင်ဘူး။ ဒါနဲ့ ပဲ အွန်လိုင်းနဲ့အဆက်ပြတ်သွားတာ အခုမှ ပြန်ဝင်ရတာ။ ဒီကြားထဲ လာရောက်လည်ပတ်တဲ့ ညီအကို မောင်နှမတွေကို ပြန်မနှုတ်ဆက်နိုင်တာ တော်တော်ကို အားနာပါတယ်။ အဲဒီအတွက်လည်း တောင်းပန်ပါတယ်။
ဒီကြားထဲ ကျွန်တော်ရဲ့ နံရိုးလေးကလည်း ကျန်းမာရေးက မကောင်းဖြစ်နေတယ်။ ပထမပိုင်း ခါးနာတယ်ဆိုလို့ဆေးခန်းသွားပြရတယ်။ ဆရာဝန်က ဆီးစစ်ပြီး ဆေးတစ်ပတ်စာ ပေးလိုက်တယ်။ တစ်ပတ်ပြည့်တော့ မသက်သာဘူး။ ဒါနဲ့ ဆရာဝန်ပြန်ပြတော့ X-ray နဲ့ Ultrasound ရိုက်ရမယ်ပြောရော။ ကျွန်တော်မှာ တော်တော်ကို ထူပူသွားတာ၊ ဒါနဲ့ဆေးခန်းက ညွှန်လိုက်တဲ့ SUNTEC CITY က ဆေးခန်းကို သွားရတယ်။ ပြီတော့ ပြန်လာကြတယ်၊ ဒီအချိန် ဖုန်းဝင်လာပါလေရော။ အဲဒီ SUNTEC CITY ဆေးခန်းက ဆက်တာ။
X-ray က Clear မဖြစ်ကြောင်း ဝမ်းသွားဖို့ လိုကြောင်း ဒါကြောင့် နောက်တစ်နေ့မနက် ပြန်လာဖို့လိုကြောင်း အကြောင်းကြားတာ။ ကျွန်တော်မှာ တော်တ်ာကို ဒေါကန်သွားတာ၊ ဒါနဲ့ နောက်တစ်နေ့ထပ်သွားရတာပေါ့။ နောက် result ထွက်တော့ ပုံမှန် ခါးနာတာ ဖြစ်နေတယ်။ အဲဒီကြမှပဲ ရင်ထဲက အလုံးကြီး ကြသွားရော။ အခုတော့ ပုံမှန် ဆေးစား၊ ဆေးလိမ်းနေရတယ်။
ဒီကြားထဲ SMRT(ရထား၊ ကား စီးခွင့်) ကဒ်ကလည်း ပျောက်သွားတယ်။ ပုံမှန်အချိန်ဆို စလုံးမှာ ဒီကဒ်ပြန်လုပ်ရင် ငါးမိနစ် မကြာဘူး၊ အခုအချိန်က စလုံးမှာ ဒီ SMRT ကဒ်တွေကို တစ်နိုင်ငံလုံး လဲပေးနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ ကျွန်တော့်မှာ ၄၅မိနစ်လောက် ကျူတန်းကြီးထဲမှာ တန်စီနေရတယ်။ တခါတရံ စဉ်းစားမိတယ်။ အဆိုးတွေ လာတဲ့အချိန်ဆို ဆက်တိုက် လာတက်သလားလို့ ။
အခုတော့ အကောင်းတွေပဲ ကျန်တော့တယ်လို့ထင်မိတယ်၊ ပုံမှန်တော့ ပြန်ဖြစ်နေပါပြီ။ မနေ့ ညကလည်း အွန်လိုင်းပေါ် ပြန်တက်တော့ ညီမလေး ဝိုင်းက တဂ်ထားတာ မိနေပြန်ရော။ ရေးပေးပါမယ် ညီမရေ....။
အခုလို အွန်လိုင်းပေါ် မရောက်တဲ့ အချိန်မှာ ပုံမှန်လာလည်တဲ့ လူတွေ၊ စီဘောက်မှာ လာလာအော်တဲ့ ညီအကို မောင်နှမတွေကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ..........။
Posted by ရွက်လွင့်ခြင်း at 10/11/2009 18 comments:
Labels: ဖွင့်ဆို ရှင်းလင်းခြင်း
အားလုံး ကြိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်
Posted by ရွက်လွင့်ခြင်း at 9/28/2009 15 comments:
ပြီးခဲ့တဲ့ပိုစ့်မှာ အားကျိုးမာန်တက်နဲ့တော်တော်များများ လာဖြေကြတာ တွေ့ ရပြီး အကုန်လုံးနီးပါးလည်း အဖြေမှန်နေတာ တွေ့ ရတော့ ဆုပေးဖို့တော်တော်ခေါင်းကိုက်သွားတယ်...း)၊ အားလုံးနီးပါလည်း အဖြေ မှန်နေကြတယ်။
အဖြေမှန်ကတော့ အသက်ကိုးဆယ်ကျော် အဖိုးကြီးပါဆိုမှ ဘယ်လိုလုပ် သွားရှိမှာလည်း၊ ဟုတ်ဘူးလား....း))
ဒါနဲ့ ပဲ အဖြေမှန်တဲ့သူ အားလုံးလည်း ဆုရရှိအောင် လာပြီး မှားမှားမှန်မှန် ကွန်မန့် ပေးတဲ့လူတွေလည်း ဆုရသွားအောင် အထူးအစီအစဉ်ကို ပြောင်းလိုက်ရပါတယ်။
အဲဒါကတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ ကွန်မန့် ထဲက အစဉ်လိုက် အတိုင်း ကိုယုယက ဦးဆောင်ပြီး တစ်ယောက်တစ်နိုင်ပဲ သယ်သွားကြပါ၊ အပိုလူ ခေါ်မလာပါနဲ့ ခင်ဗျာ.... အထူးမေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ The Queen တို့ လို မိခင်တွေလည်း ခလေး ခေါ်လာလို့ မရပါခင်ဗျား)
အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီး ဘလော့ဂါတွေလည်း အပိုခေါ်မလာပါနဲ့နိုင်သလောက်ပဲ သယ်သွားပါလို့တောင်းပန်ပါရစေ။
ကဲ နိုင်သလောက်သာ သယ်သွားပါတော့ဗျား))
ပုံကို ဖော်ဝတ်မေလ်းမှ ရပါတယ်
ဘလော့ဂါ မောင်နှမ အားလုံး ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ
Posted by ရွက်လွင့်ခြင်း at 9/22/2009 18 comments:
တခါတုန်းက တောမြို့ လေးတစ်မြို့ မှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးပါ။ မြို့ ငယ်လေးတစ်မြို့ ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ရထားဘူတာရုံလေး ရှိပြီး အစုန် အဆန် ရထားတွေ နေ့ စဉ် ဖြတ်သွားတဲ့ အတွက် သူဟာနဲ့ သူတော့ စည်ကားလှပါတယ်။ မြို့ ငယ်လေးရဲ့ ထုံစံအတိုင်း ဘူတာရုံလေးကို ဗဟိုပြုပြီး ကုန်စည် စီးဆင်းနေတာပေါ့။
ဘူတာရုံဘေးဘက်မှာတော့ ရထားလမ်းနဲ့ အပြိုင် ဈေးတန်းလေးက မနက်တိုင်း အရောင်းအဝယ် ဖြစ်လို့ နေတယ်။ တစ်မြို့ လုံးမှာလည်း အဲဒီဈေးလေးတစ်ခုပဲ ရှိတယ်။ ဘူတာရုံ တစ်ဘက်ခြမ်းမှာနေတဲ့ လူတွေကလည်း မနက်တိုင်း ရထားသံလမ်းကို ဖြတ်ကျော်ပြီး ဈေးကိုလာတာဟာ အဲဒီမြို့ ကလူတွေအဖို့အထူးအဆန်းမဟုတ်တော့ပါဘူး။
အဲဒီ ဈေးတန်းလေးရဲ့ မြင်ကွင်းဟာ နေ့ စဉ်နေ့ တိုင်း သမရိုးကျ ပုံမှန်လည်ပတ်နေတာပေါ့။ အဲဒီအချိန်မှာ အသက် ကိုးဆယ်ကျော်လောက်ရှိမယ့် အဖိုးအို တစ်ဦးဟာ တုန်ချည့်တုန်ချည့်နဲ့ရထားလမ်းကို ဖြတ်ကျော်ပြီး ဈေးကို လာနေပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ အစုန်အဆန်ရထားနှစ်စင်းဟာ မျက်နှာချင်းဆိုင် အနေအထားနဲ့ဥသြဆွဲပြီး လာနေပါတယ်။
လူငယ်လူရွယ်တွေကတော့ ခပ်သွက်သွက် ရထားလမ်းကို ဖြတ်ကူးနေကြတယ်။ တစ်ချို့ကလေးအမေတွေနဲ့လူကြီးတစ်ချို့ က ရထားနှစ်စီး ဖြတ်မောင်းသွားပြီးတဲ့ အချိန်ထိ စောင့်ပြီးမှ သံလမ်းကို ဖြတ်ဖို့စောင့်နေကြတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ အဖိုးအိုက တုန်ချည့်တုန်ချည့်နဲ့ရထားသံလမ်းကို ဖြတ်ကူးဖို့ကြိုးစားနေတယ်။ ဒီမြင်ကွင်းကို တွေ့ တော့ စိုးရိမ်တဲ့ လူတွေက ဝိုင်းအော်ကြတာပေါ့။
"အဘ... ရထား လာနေတယ် ခဏစောင့်လိုက်ဦး.."
"အာ....ဒီလူကြီး သေချင်လို့ လား မသိဘူး"
အဲလိုနဲ့တစ်ယောက်တစ်ပေါက် ဝိုင်းပြီး အော်ကြတာပေါ့။ အဖိုးကြီးကတော့ မကြားတာလား၊ သိရဲ့သားနဲ့ဖြတ်ကူးတာလား ဘယ်သူမှ မသိဘူးပေါ့။ လူတွေကလည်း အထိတ်တလန့် နဲ့ ပေါ့။ ရထားနှစ်စင်းကလည်း အရှိန်ပြင်းစွာနဲ့ဖြတ်သွားပါလေရော။ လူတွေမြင်လိုက်တာ အဖိုးကြီးဟာ ရထားနှစ်စင်းကြားထဲမှာ ရိပ်ခနဲ တွေ့ လိုက်ရတယ်။
ရထားနှစ်စင်းလည်း ဖြတ်မောင်းပြီးသွားရော လူတွေအကုန်လုံး အဖိုးကြီး သွား ကြည့်တာ မရှိတော့ဘူးတဲ့
ဘလော့ဖတ်သူအားလုံး ဒီပိတ်ရက်မှာ စဉ်းစားပြီး ဖြေနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ အဖြေတွေကို ကွန်မန့် မှာ ရေးပေးသွားပါခင်ဗျာ။
အဖြေမှန်တဲ့လူကို ဆုငွေ ချီးမြှင့်မှာပါ။ အဖြေမှန်ကို နောက်ပိုစ့်မှာ တင်ပေးပါမယ်။
Posted by ရွက်လွင့်ခြင်း at 9/18/2009 18 comments:
လက်ရှိ စင်ကာပူမှာ နေထိုင်ပါတယ်
စလုံးကို ပြန်ရောက်လာပါပြီ ပုံမှန် ဘလောဂ်ဂင်းနိုင်အောင် ကြိုးစားနေပါတယ်
pm's flash fiction